DAAWO: Faa’iidada caafimaad iyo xogta dahsoon ee ku jirta qaniinyada quraanshada – Warfaafiye:
DAAWO: Faa’iidada caafimaad iyo xogta dahsoon ee ku jirta qaniinyada quraanshada
Ali Mohyadin Jul 18, 2017 0
Quraanshada, waxay ka mid tahay xasharaadka yaryar oo caalamka idil laga heli karo. Marka ay ku qaniinto quraanshada haka xanaaqin, hana u qaadan inay waxyeelo kuu geysatay, hana ku fekerin inaad disco.
Waayo qaniinyadeedi waxay kuu leedahay faa’iido, waana inaad ugu mahadnaqdaa, faa’idada laga helo qaniinyada quraanshada waxay jirka gelisaa firfircooni waxayna kordhisaa xinjiraha dhiiga, tan labaad ee ay leedahayna waxay ka taqluusjtaa baruurta jirka ku jirta, gaar ahaan marka ay ku qaniinto quraanshada dhediga ah.
Cilmi baaris la sameeyay ayaa sheegeysa in qaniinshaha badan ee quraanshada ay jirka gaar ahaan maqaarka sare faa’iido badan u leedahay, haddii ay ku qaniintana ha dilin ee u mahadnaq, Halkan ka daawo warbixinta oo dhameystiran.
Ra’iisul wasaaraha xukuumadda Somalia, Xasan Cali Kheyre ayaa gelintii danbe maanta kormeer kedis ah ku tegay wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka, taasoo ka mid ah wasaaraddaha ugu shaqada badan xukuumadda.
LIKE GAREEY SI WARARKEENA U HESHID
Shuruudaha murcshaxiinta guddoonka BF iyo wasiiro la faray inay iscasilaan
Jadwalka doorashada guddoomiyaha baarlamaanka oo la shaaciyay
Dhageyso: Waa in la caddeeyaa maqaamka caasimada Muqdisho
Shuruudaha murcshaxiinta guddoonka BF iyo wasiiro la faray…
Jadwalka doorashada guddoomiyaha baarlamaanka oo la…
Fahad Yaasiin oo juhdi iyo dhaqaale ku bixinaayo hal…
Video: Wiil xubintiisa taranka ku waayay qarax ka dhacay…
Tirada Maraakiibta dagaalka ee Ruushka geysanayo saldhiga…
C/weli Gaas oo looga yeeray Imaaraadka & xog ku saabsan…
Meydka gabar lix bil jir la kufsaday oo laga helay wado
Jabuuti oo loo aqoonsatay caasimada dhaqanka iyo dalxiiska
Warbixin: Qorshe Ruushka saldhig milateriga ugu dhisanaayo…